Ku biiritaanka Google Top ee leh Semalt
Booska khadka tooska ah ee internetka ayaa qeexaya sharciyadiisa. Ku sameynta meheradda Internetka ma ahan sida ganacsiga ee adduunka dhabta ah. Labadooduba way ka fududdahay oo ka sii adag. Haddii aadan aqoon shuruucda dunidan, daaqadda waad ka bixi doontaa. Haddii aad isticmaasho kobcinta SEO, ganacsigaagu wuxuu u shaqeyn doonaa sida saacad-shaqeedka. Haddii aad tahay milkiile shirkad, falanqeeye ganacsi, ama khabiir suuq geyn ah, waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad barato qaabab cusub oo loogu adeegsado wax ku oolnimada aaladaha websaydhka. Nooc kasto oo lacag ah, haddii ay sharci tahay, waa la xoojin karaa, la horumarin karaa, lana horumarin karaa haddii aad taqaanid xeerarka meelaha bannaan.
Miyaan horumarin karaa ganacsi khadka tooska ah?
Waxaad maqashay sheekooyin ku saabsan dadka ganacsikooda internetka ka bilaabay xoq. Laga yaabee in nimankan farxadda leh ay si lama filaan ah uga heleen sharciyada dallacsiinta ee World Wide Web. Ma waxaad tahay qof caqli badan oo xariif ku ah inaad si madax-bannaan u kordhiso isku-xirnaanta shabakadda ee ganacsiga 'e-commerce'? Maxuu u baahan yahay ganacsade laylis yaqaan ah? Halkee laga heli karaa dhiirrigelin dhalashada mashaariicda aan caadiga ahayn? Raadinta macluumaadka, waxaad u tagtaa ilo kala duwan oo internetka ah. Warar badan ayaa kuu soo dhacaya. Waxaad ku oqoon doontaa isku-dheelitirnaan iyo jahwareer, iyo kahor intaadan helin khibrad kasta, waxaad ka niyad jabi doontaa boqol jeer goobaha dalxiiska iyo fursadaha aan xad lahayn.
Hagaag, habkan ayaa waliba macquul ah. Waad ka qalinjabi kartaa koorso shaqsiyeed, adoo ku bixin kara qalin qurxoon. Maxad ka heshaa natiijo ahaan? Qayb ah aqoon cayriin ah oo u baahan in lagu dabaqo duruufaha aan caadiga ahayn ee aan lagu sharixin buugga kasta. Haddana, waxaad u jeesan doontaa macallinkaaga, kaasoo kaa siin doona jawaab aan macno lahayn. Sabab? Waxay ka fogaan kartaa xaaladaha nolosha dhabta ah. Maxaad waayi doontaa? Waxaad lumineysaa maalmo iyo bilooyin qaali ah. Tani waa waqtigii fursadaha aad seegtay. Sabab? Meheraddaada ganacsi ayaa la dejin doonaa, oo waa inaad raadiso fikrado cusub iyo fursado cusub. Diyaar ma u tahay himiladaas?
Aaladaha Shabakadda Isgaarsiinta ee Guusha
Macaamiisha ayaa fiirinaya bakhaarada internetka ee nooca dukaamaysiga ay ku leeyihiin adduunka dhabta ah. Waxay u baahan yihiin qaab shaqsiyeed iyo taageero nafsi ah. Laakiin si fudud uma awoodid inaad u adeegtid dhammaan booqdayaasha dukaankaaga meheradda ah, gaar ahaan haddii ay isku waqti yimaadaan. Hadaadan ka helin kalsoonida macmiilka qaab dabiici ah, khiyaamada suuq geynta si weyn ayaa loo dafirayaa. Taasi waa sababta ganacsadaha khadka tooska ah ugu baahan yahay dad khibrad leh oo maamuli doona qodobka bini aadamka, iyo sidoo kale aalado xakameyn wax ku ool ah.
Iyadoo aan loo eegin jihada meheraddaada, waxaad u baahan doontaa gogol wax ku ool ah oo aaladda SEO ah iyo khabiiro kuwaasoo gacan ka geysan doona socodsiinta ganacsigaaga. Iibinta xitaa sheyga ugu badan ee internetka ma ahan wax fudud sida ay umuuqato jaleecada hore. Taasi waa, haddii aad iibinaysid hal mashiin ama hal barnaamij, waxaad si dhakhso leh u sameyn doontaa. Laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa iibka joogtada ah iyo kororka, taas oo ah inaad u hesho faa'iido tartan iyo taageero macaamiil oo kaamil ah.
Iyada oo marin loo helo daahfurnaan iyo macluumaad deg deg ah, softiweerka koowaad wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa horumarinta ganacsiga. Guusha ayaa si isa soo taraysa ugu imaanaysa shirkadaha dhexdhexaadka ah, iyo bilaabayaashu waxay la dhacsan yihiin faa'iidooyin aad u sarreeya. Macaamiisha suurtogalka ah waxay ku wareegayaan agagaarka duurka muddo dheer. Waa inaad u diyaar garowdaa kumanaan kun oo dad aad u xiiso badan oo ag maraya. Qofku wuxuu ku xiri karaa macmiilka xiisaha uu u qabo nolol maalmeedkiisa iyo dhibaatooyinkiisa. Dareenka dareenka xiriirka iskuxiranku wuxuu u baahan yahay siyaasad suuqgeyn gaar ah iyo ka qeybgalkaaga sii wadida. Macaamiisha suurtagalka ah waa in si tartiib ah loogu daryeelo, iyaga oo beeranaya kalsoonidooda astaantaada.
La kulan Adeegga Shabakada Semalt
Aaladda kor ku xusan ee internetka waxay soo jiidan doontaa macaamiisha cusub waxayna si weyn u kordhin doontaa dakhligaaga. Tiradooda aad ayey u badan tahay, laakiin dhammaantood ma dhaafaan xuduudaha gobolka loo adeego. Wakaaladdayaga Dijitaalka ah waxay siisaa macaamiisheeda keliya aalad suuqgeyn wax ku ool ah, laakiin sidoo kale istiraatiijiyad kuu oggolaaneysa inaad sare u qaaddo suuragalka mashiinnada raadinta. Haddii aad rabto inaad ka baxdo gobolkaaga, gobolkaaga, waddankaaga, ama xitaa qaaradda, waxaad leedahay aalad lagu kalsoonaan karo. U isticmaal inaad caan ka noqotid adduunka oo dhan.
Semalt wuxuu kugu hoggaamin doonaa wadooyinka qarsoodiga ah ee matoorada raadinta, xulashada erey-fureyaal si toos ah ula xiriira howlahaaga ganacsiga. Ku dhawaad isla markiiba, waxaad heli doontaa dhammaan xogta loo baahan yahay ee ku saabsan warshadaha guud ahaan, hufnaanta tartanka, iyo sumcadda. Waxaad awoodi doontaa inaad daawan karto horumarka shabakadaha bulshada, adoo kordhinaya joogitaankaaga daqiiqad kasta.
SEO ma waayi doono muhiimadeeda qarnigii labaatanaad. Waxay ku saabsan tahay taraafikada dabiiciga ah ee magacaagu ku heli doono makiinadaha raadinta. Semalt wuxuu kaa caawin doonaa inaad qaadato deganaansho. Maalgelin yar iyo iskaashi joogto ah oo lala yeesho khubaradeena ayaa natiijo wax ku ool ah ka soo bixi doonta. Khaladaadkaaga ganacsi si nidaamsan ayaa looga tirtiri karaa. Guuldarrooyinka qaar ayaa suurtagal ah, laakiin istiraatiijiyad si fiican loo qorsheeyay ayaa iska caabin kara cadaadiska suuqa. Xulo istiraatiijiyad ku habboon suuqaaga oo tag taas.
Muuqaalka Semalt waxaa horay u go'aamiyay horumarinta internetka. Maskaxda quruxda badan maahan wax caadi ah, laakiin haddii ay ku jiraan hal koox, mucjiso ayaa dhacda. Mucjiso ayaa dhacday sanadkii 2013 markii dad aad u caqli badan ay go’aansadeen inay ku biiraan ciidamada oo abuuraan Semalt. Shirkadda waxay leedahay shaqaalaheeda adduunka oo dhan. Maanta, ragga da'da yar iyo kuwa ballanqaada uma baahna inay meel u aadaan si ay u caddeeyaan aqoontooda. Midkastoo ka mid ah wuxuu leeyahay gadaashiisa / aqoonteeda aasaasiga ah iyo xirfadaha mashruucyada IT-ga.
Si aad u ogaatid meheraddaada, uma baahnid inaad saf u istaagto. Looma baahna in dib loo bilaabo giraangiraha si loogu qoro daweynta. Si aad u hesho natiijooyinka ugu sareeya ee Google, waxaad u baahan tahay inaad la xiriirto khabiirada Semalt. Waxaan leenahay kaniini ka qeyb qaadan doona koritaankaaga. Daaweyntayadu way shaqeynaysaa, iyadoon loo eegayn jinsiyadda, gobolka, ama qaaradda. Ma dooneysaa in taleefankaaga casriga ahi si joogto ah uga helo wicitaannada macaamiisha? Ma dooneysaa in emaylkaaga lagu buuxiyo maalin walba boqolaal emayl ah oo aan la aqrin? Ma dooneysaa inaad kor ugu qaaddo qiimeynta shirkaddaada calaamadaha ugu sareeya? Ma dooneysaa inaad kordhiso dakhligaaga laba, saddex, iyo wax la mid ah? Wax walbana way fududahay. Haddii aad diyaar u tahay inaad kobciso meheraddaada, sii wad akhriska maqaalkan.
Qalabka Semalt SEO waxaa adeegsada macaamiisha ka imanaya daraasiin dalal adduunka ah. Si xun ma ugu hadashaa Ingiriisiga? Shaqaalaheenu waxay ku hadli doonaan afkaaga hooyo. Websaydhka shirkadda, waad ka baran kartaa mid kasta oo ka mid ah. Waxa jira dib u eegisyo ah macaamiisha mahadsan. Kuwani maaha sheekooyin la soo hindisay oo aan sal ku lahayn nolosha adduunka. Adiga laftaadu waad booqan kartaa bogagga shirkadaha guuleysta ee Semalt ka caawiyay inay barwaaqo:
ADEEGYADA ROYAL (Xarunta Adeegga Apple). Shirkaddan Yukreeniyaan waxay ka faa'iideysatay Semalt FullSEO waxayna kordhisay taraafikada dabiiciga ah afar jeer muddo 10 bilood gudahood!
Zaodrasle.si. Dukaan galmo oo internetka laga isticmaalo oo Slovenia ah ayaa soosaarayay badeecado iyo adeegyo lix sano ah. Muddo toban bilood ah oo ay iskaashanayaan Semalt, goobtani waxay kordhisay taraafikada raadinta dabiiciga ah 520%, waxayna sidoo kale kordhisay tirada booqashooyinka bil kasta illaa 1216. Maanta, Zaodrasle.si waa shirkadda ugu horreysa ee Slovenia duulimaadkeeda.
Xariirka raadinta iyo iibsashada sharikadaha SEO Will Frankling ayaa sheeganaya in xirmada FullSEO ay ka caawisay ganacsigiisa inuu kordhiyo tirada ereyada muhiimka ah ee Google TOP-10 ilaa 5782, iyo taraafikada dabiiciga ah 303% 9ka bilood ee ugu horreeya. Maanta, shirkadani waa mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee warshadaha loo yaqaan 'franchise industry' ee Boqortooyada Ingiriiska.
Qof kasta oo adeegsada internetka wuu ogyahay waxa mashiinka baaristu yahay. Xaqiiqdii waad isticmaashay midkood. Maanta waxbadan baa jira, laakiin Google ayaa ah kuwa ugu caansan. Sidee ayuu u shaqeeyaa mashiinka baaristu? Waxaad soo gashaa codsi waxaadna heleysaa liistada boggaga ay heleen Google, Rambler, ama Yandex. Fiiro u yeelo in goobaha qaar ay ku dhacaan meesha ugu horeysa, halka qaarna ay wali ka dambeeyaan. Sida tirakoobyadu muujinayaan, qaybta libaax ee adeegsadayaasha ayaa furi doonta kaliya xiriirada ku jira jagooyinka ugu horreeya. Si aad u gasho TOP-10, waa inaad fulisaa dhowr tillaabooyin oo aad ku kordhineyso booska goobta barta 'Google-index' ee weydiimaha horay loo shaqeeyay.
Ku hawlanaanta qalabka SEO
Injineerada Semalt way yaqaanaan sida loogu meeleeyo goobta ugu horeysa Google TOP 10. Waxaan si weyn u kordhin doonaa taraafikada iyo iibka internetka. Dhiirrigelinta internetku waxay waxtar u yeelan kartaa DHAMMAAN shirkadaha dhagaystayaashooda ah ay raadinayaan alaabo ama adeegyo la mid ah internetka. Marka loo eego tirakoobka, tirada isticmaaleyaasha Internetku wey sii kordhayaan sannad kasta. Maanta, in ka badan saddex-meelood meel dadka dunida deggan waxay isticmaalaan internetka. Muxuu dhagaystayaashani ugu xiiso badan yihiin ganacsigaaga? Way bixin kartaa. Tobaneeyo iyo boqolaal kun oo adeegsadayaal ah ayaa maalin walba raadiya badeecadaada laakiin raadiyaan alaabooyinka tartamaya. Tani waa sababta oo ah tartamayaal aad u karti badan ayaa horay u qabtay meelaha ugu fiican natiijooyinka mashiinka raadinta. Waxa kale oo aad meelahaas ka qaadan kartaa qorraxda. Si tan loo sameeyo, waa inaad bilowdaa kobcinta mashiinka websaydhka.
Foom gaaban oo la heli karo, waxaan ku sharxi doonaa booqdeyaasha waxa aad sameyneyso. Fiidiyowga xayeysiinta ah ee ganacsigaaga ayaa ka caawin doona soo jiidashada macaamiisha cusub iyo kordhinta beddelka.
Falanqaynta goob ganacsi
Xaqiiqada casriga ah, macluumaadku waa dhiigga ganacsiga. La'aanteeduna waxay horseedaysaa dhiig yaraan. Si aad had iyo jeer u ogaato una maamusho meheraddaada, adeegso xoghaynta ujeedka ah ee sahaminta, oo saadaalinno horumarkaaga. Ku xakameyso ganacsigaaga khadka tooska ah khubaro Semalt ah!
Inka badan seddex kun oo milyan oo macaamiisha mustaqbalka ah kama dan leeyihiin inay iibsadaan badeecadaada. Maxaysan iyagu sidan u samayn karin? Malaayiin kuwa kula tartamaya ayaan kuu ogolaan doonin inaad galaan Google Top. Ganacsiga kor ugu qaad heer aad u sarreeya! Soo hel qaabab suuq geyn oo cusub oo ku guuleysto tartanka! Sidee loo sameeyaa? Xulo xirfadlayaal dhab ah oo leh khibrad balaaran. Noqo macaamiil Semalt maanta! Macmiil ahaan, waxaad heli doontaa xirmo adeegyo oo dhammaystiran, oo ay ka mid yihiin horumarka, dib-u-habeynta, iyo dallacsiinta bakhaarkaaga internetka, iyo sidoo kale taageero farsamo oo xirfad leh. Adoo dooranaya Semalt, waxaad si fudud u maamuli kartaa meheraddaada internetka oo waxaad noqon kartaa NADAAD DAYAX.
Xirfadlayaal khibrad leh ayaa raba inay iskaashi la yeeshaan dalkasta oo dunida ah, sanadka oo dhan, wakhti kasta oo saacad ah. Dadkani waxay fahmi doonaan waxyaabaha gaarka ah ee nooc kasta oo ganacsi ah.
Diiwaanka Semalt waxa ku jira in kabadan 800,000 oo kiis oo la dhammaystiray in kabadan 300,000 macaamiil. Dhamaan mashaariicda waxaa laga heli karaa kheyraadkayaga.
Maalgashiga ugu yar ee horumarinta mashruucaaga iyo natiijooyin wanaagsan.
Waxaan had iyo jeer ka yaabinaa macaamiisheena sicirro dabacsan iyo dalabyo faa'iido leh.
Waa maxay Kordhinta Mashiinka Raadinta Mashiinka ah?
Meheradda ayaa hoos imaan doonta gacanta maamulaha shaqsiyeed iyo kooxdeena SEO. Waxaan ka hubin doonnaa goobtaada soo-saareyaasha Google oo aan horumarin doonnaa istiraatijiyad la-socod ah. Waxyaabaha kale, khabiirada Semalt waxay dooran doonaan ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan kuwaas oo soo jiidan doona bartilmaamed macquul ah. Waxaan falanqeyn doonaa qaab dhismeedka goobta iyo qeybinta ereyada furaha ah, sidoo kale waxaan xulan doonnaa bogag ku saabsan dhiirrigelinta xigta ee weedhaha la xiriira. Waa lagama maarmaan in la ururiyo macluumaadka ku saabsan kuwa aad xafiiltamaan si aad ula kulantaan iyaga oo si buuxda u hubaysan.
Sidee loo habeyn karaa ilaha internetka?
Si aad uga faaiideysato dukaanka khadka tooska ah ee xafiiltamaan, waa inaad ka takhalustaa xaddidaadaha horjoogsanaya xayeysiinta. Waxaan ku bixinaa talaabooyin isku xigxig ah oo kaa gelin doona meesha ugu horeysa:
si loo abuuro calaamadaha meta ee waafaqsan ereyada muhiimka ah;
si loo hagaajiyo koodhka HTML;
si loo sameeyo calaamadaha iyo astaamaha ay heerarka casriga ah ee matoorada raadintu la kulmi doonaan.
Kicinta sidoo kale waxay ka dhigan tahay xiritaanka xiriirada jajabay iyo abuurista xaddiga ugu badan ee xiriirada ilaha la dalacsiiyay. Tafatirka robots.txt iyo .htaccess faylasha waxay si weyn u wanaajin doonaan aragtida bartaada ee qiimeynta bogga mashiinka raadinta.
Erayo iyo ereyo aad u waaweyn oo badan, sax? Waxaan kaa ilaalinaynaa jahwareerka iyo madax xanuunka, halkan kuma liis gareeyno dhamaan talaabooyinka "daaweynta". Hadda waxaad aragtay sida ay u adag tahay in booska koowaad loo qaado iibinta iyo caannimada websaydhka Adduunka. Dhiirrigelinta SEO runtii waxay u baahan tahay aqoon gaar ah waxayna ku saleysan tahay khibradda mashaariicda hore. Koox dhalinyaro ah, dhiiran, iyo xirfadlayaal guuleysta ayaa diyaar u ah inay ku caawiyaan. Si wada jir ah ayaan u bilaabi doonnaa olole wax ku ool ah oo SEO ah isla markaana ganacsigaaga ka dhex arki doona booqdayaasha iyo kuwa wax iibsan kara. Guul waa suurtagal. Luck wuxuu khiyaamey xirfadlayaasha. Kooxda Semalt waxay noqon doonaan mashiinkaaga xoogga badan wadada loo maro caannimada iyo barwaaqada hadaad rabto.
Waxaad ku noolaan kartaa meel kasta oo adduunka ka mid ah oo aad ku hadli kartaa luqad kasta. Waad ku hagaajin kartaa qalabka Apple gudaha Minsk ama waad iibin kartaa guryaha ku yaal Mareykanka. Xaqiiqdii waxaan u heli doonnaa xalka ganacsigaaga waxaanan sare u qaadnaa shabakadaada. Waan ognahay sida ay u shaqeyso maxaa yeelay waxaan nahay barwaaqo. Maskaxda ku haay ganacsigaaga oo aan ogolaanno inaan horumarinno. Wadajir ayaan u gaari doonnaa waxyaabo badan!